Sat, Jul 11, 2020 at 1:12pm
'एनएफडिसी राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’का उत्कृष्ट पाँच चलचित्रको मनोनयन सार्वजनिक
बुधबार, श्रावन २६, २०७३ साल
काठमाडौँ । नेपाल चलचित्र विकास कम्पनीले ‘एनएफडिसी राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार–२०७२’ को उत्कृष्ट पाँचको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । गोपीकृष्ण मुभिजसँगको सहकार्यमा हरेक वर्ष हुँदै आएको यस पुरस्कारअन्तर्गत १७ विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको हो । ‘क्लासिक’ र ’प्रेमगीत’ दुई चलचित्र समान ११ विधामा मनोनित भएका छन् । त्यस्तै ‘पशुपतिप्रसाद’ र ‘वडा नम्बर ६’ समान आठ÷आठ विधामा मनोनीत भएका छन् भने ‘कबड्डी कबड्डी’..
आजबाट फरक धारका तीन चलचित्र एकैसाथ प्रदर्शनमा
शुक्रबार, श्रावन २१, २०७३ साल
काठमाडौं । शुक्रबार तीन वटा नेपाली चलचित्र एकैसाथ प्रदर्शनमा आउँदैछन् । तीनै चलचित्र फरक धारका छन् । त्यसमध्ये एक किशोर रानाको निर्देशनमा बनेको पछिल्लो चलचित्र ‘प्रतिविम्ब’ मगर संस्कृतिमा आधारित चलचित्र हो । चलचित्रमा मुख्य अभिनेता मनसुदन थापा र अभिनेत्री पवित्रा सारु मगर रहेका छन् । द लाफा आर्टस इन्टरनेसनलको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रको कथा निर्देशक राना स्वयम्ले लेखेका हुन । त्यस्तै चलचित्रमा..
'रेश ३' मा अब सैफ नभई सलमान खान!
बिहिवार, श्रावन २०, २०७३ साल
काठमाडौँ। एकपछि अर्को गर्दै हरेकजसो फिल्मलाई सफलता दिलाउँदै अघि बढेका वलिउड सुपरस्टार सलमान खान पैसा छाप्ने मेसिनकै रुपमा गनिन्छन् । जहाँ उनको अनुहार समेटिन्छ त्यो बिक्छ, करोडौंको कारोबार हुन्छ । यसैकारण पनि सलमानलाई लिएर काम गर्न वलिउडमा निर्माता निर्देशकहरुको लर्को लाग्छ । पछिल्लो पटक 'सुल्तान'लाई सुपरहिट बनाएका सलमान अहिले नयाँ प्रोजेक्ट 'ट्युबलाईट'मा व्यस्त भईसक्दा नयाँ खबर बाहिरिएको छ कि, सफल सिरिज..
एक्शन अबतारमा आउँदै पल शाह, 'जोनी जेन्टलमेन' घोषणा
काठमाडौँ। 'नाई नभन्नु ल ४' डेब्यू अभिनेता पल शाह दोश्रो फिल्ममा देखिने पक्का भएको छ । लभ स्टोरी फिल्ममा देखिएका चर्चित मोडल पल अब एक्शन अबतारमा देखिने भएका हुन् । पलले दोश्रो फिल्ममा पनि आँचल शर्मा सँगै रोमान्स गर्नेछन् । बुधबार राजधानी आयोजित कार्यक्रममा पल र आँचल अनस्कृन रोमान्समा रहनेगरी एक्शन फिल्मको घोषणा गरियो । फिल्मलाई नितिन चन्दले निर्देशन गर्नेछन् ।..
छायाँकन अगाबै 'बाहुबली'को कन्सेप्ट फोटोहरु सार्वजनिक, फेसबुक र ट्वीटरमा भाईरल
काठमाडौँ। भारतमा सर्वाधिक कलेक्शनको रेकर्ड राखेको फिल्म 'बाहुबली'को सिक्वेलको छायाँकन अहिले अन्तिम अन्तिम चलिरहेको छ । करिब ३०० देखी ५०० जनाको क्रियू टिम फिल्मको छायाँकनमा व्यस्त हुँदै गर्दा निर्माण टिमको योजना विपरित फिल्मका कन्सेप्ट फोटोहरु सार्वजनिक भएका छन् । सुटिङको लागी तयार बाहिरिएका कन्सेप्ट फोटोहरु हेर्दै आकर्षक लाग्ने छन् भने हालसम्म कमै फिल्ममा लगाएको सेट 'बाहुबली २' मा प्रयोग हुने देखिएको छ..
कमाईमा नयाँ रेकर्ड बनायो सलमानको 'सुल्तान'ले
मंगलवार, आषाढ २८, २०७३ साल
नयाँ दिल्ली । सलमान खानको फिल्म 'सुल्तान' ले बलिउड बक्स अफिसमा चमत्कार गरेको छ । बलिउड फिल्म उद्योगमा यसले पाँच दिनमै दुई अर्ब रुपियाँ कमाउन सफल भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । गत साता रिलीज भएको सुल्तानले दर्शकहरुको अपार मन जित्न सफल भएको छ । चलचित्र हलहरुमा यो फिल्म हेर्ने मानिसहरुको लामो लाइनहरु देखिएका छन् । इस्लामहरुको पर्व इदका अवसरमा..
यी हुन राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार हात पार्ने भाग्यमानीहरु (फोटो फिचरसहित)
बिहिवार, आषाढ १६, २०७३ साल
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र बोर्डले गत वर्ष प्रदर्शित चलचित्रमध्येबाट विभिन्न विधामा उत्कृष्ट ठहर भएका चलचित्रकर्मीलाई ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा चलचित्र दीर्घसाधना सम्मान–२०७२’ द्वारा सम्मान गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राई र बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले पुरस्कारसहित उनीहरुलाई सम्मान गरेका हुन । चलचित्र ‘कबड्डी–कबड्डी’बाट दयाहाङ राईले उत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार जित्दै..
'लुकामारी' को सुखद ओपनिङ,तीन दिनमै ३७ लाख कमाई
मंगलवार, आषाढ १४, २०७३ साल
काठमाडौँ । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र 'लुकामारी'ले सुखद ओपनिङ गरेको छ । कमेडी क्राईम जनराको फिल्मले दर्शक हँसाउन सफल भएको बुझिएको छ । मुख्य अभिनेता सौगात मल्ल, कर्मा शाक्य र बिक्रमसिंह थारुले आफ्नो आफ्नो पात्रलाई न्याय गर्दा दर्शक हलबाट निस्किँदा रमाइलो मानेका छन् । फिल्म निर्माण टिम तथा वितरण कम्पनिलाई उधृत गर्दै मिडिया संयोजक विजय सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार फिल्मले राजधानीबाट..
हलिउड स्टार मिइस्सिल भक्तपुरका सम्पदा अवलोकनमा
आईतवार, आषाढ १२, २०७३ साल
भक्तपुर । नेपाल भ्रमणमा आएकी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)की सद्भावना दूत एवम् हलिउड स्टार मिइस्सिल एहले शनबार भक्तपुरका विभिन्न सम्पदाको अवलोकन गरिन । उनलाई अवलोकन गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेल भक्तपुर दरबारक्वायर पुगेका थिए । मिइस्सिलले भूकम्पका कारण क्षति पुगेका दरबारस्क्वायर क्षेत्र, तलेजु, पाँचतले मन्दिरलगायत क्षेत्रको रुचीपूर्वक अवलोकन गरेक िथिइन । मन्त्री पोखरेलले सद्भावना दूत एहलाई..
फ्राईडे रिलिज: 'कालोपोथी' 'छेस्को र 'हाउसफूल-३' आजबाट नेपाली हलमा भिड्दै
शुक्रबार, जेष्ठ २१, २०७३ साल
काठमाडौँ। फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत यो हप्ताको लागी 'कालोपोथी' र 'छेस्को' प्रदर्शनमा आएका छन् भने बलिउडमा यस साता 'हाउसफूल ३' पनि शुक्रबारबाटै प्रदर्शनमा आएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी तथा पुरस्कृत फिल्म 'कालोपोथी' निकै रुचाईएको फिल्म हो । यस फिल्मको हिजो राजधानीमा प्रिमियर शो पनि गरियो । मिनबहादुर भामद्वारा निर्देशित फिल्ममा वेनिशा हमाल, खड्कराज नेपाली र शुक्रराज रोकाया मुख्य भूमिका रहेको छ। 'कालोपोथी'लाई..
Results 550: You are at page 19 of 19
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19